हाम्रो बारेमा-Skyward दूरसंचार कं लिमिटेड
स्काईवार्ड टेलिकम २०० in मा स्थापित भएको थियो र तब देखि हामी नयाँ र दोस्रो टेलिकम नेटवर्क र कम्प्यूटर हार्डवेयर र सम्पत्ति प्रबंधन सेवाहरु लाई ग्राहकहरु को हजारौं, सबै दुनिया भर मा उपलब्ध गराउने बाटो को नेतृत्व गर्दैछौं।
हामी सिस्को, एरिक्सन, नोकिया, हिमाचल प्रदेश, DELL, HUAWEI सहित धेरै OEMs भर मा नयाँ र पूर्व स्वामित्व वाला वायरलेस नेटवर्क र कम्प्यूटर उपकरण को एक विस्तृत श्रृंखला बेच्दछौं। यसमा स्विचिंग समाधान, राउटर, एसएफपी, रेडियो, फाइबर र कोक्स केबल असेंबली, कस्टम र्याकिंग र बीटीएस कन्फिगरेसन, बिजुली आपूर्ति, एन्टेना र आरएफ कम्पोनेन्टहरु सामेल छन्। हाम्रा उत्पादनहरु 80 भन्दा बढी देशहरुमा ग्राहकहरु लाई बेचिएको छ र Capex बजेट विस्तार र हाम्रो ग्राहकहरु को सबै को लागी परिचालन खर्च घटाउने को एक प्रमाणित इतिहास छ।
ढुवानी कहिले सम्म लाग्छ?
तपाइँको उत्पादनहरु पठाइएको छ पछि, यो ३ देखि ४ व्यापार दिन लाग्न सक्दछ उनीहरुलाई तपाइँलाई डेलिभर गर्न। जे होस्, निर्दिष्ट सबै वितरण मितिहरु मात्र अनुमानित छन् र धेरै कारकहरु को आधार मा परिवर्तन को अधीनमा छन्, मौसम को स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा शुल्क प्रक्रियाहरु, स्थानीय कुरियर र वितरण कम्पनीहरु, आदि सहित सीमित छैन।
यदि मलाई तत्काल एक उत्पादन चाहिन्छ, तपाइँ छिटो वितरण प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ?
हामी फरक ढुवानी समय र मूल्यहरु संग फरक ढुवानी विधिहरु प्रदान गर्दछौं। यदि तपाइँ एक उत्पादन तुरुन्तै आवश्यक छ, तपाइँ ती ढुवानी विधिहरु कि छिटो भन्दा छिटो वितरण मिति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ।
म कसरी मेरो अर्डरको स्थिति जाँच गर्न सक्छु?
एक पटक तपाइँको अर्डर बाहिर पठाइयो हामी तपाइँलाई ट्र्याकि number नम्बर र saatus अपडेट गर्नेछौं।
कुन भुक्तानी विधिहरु Skyward दूरसंचार मा समर्थित छन्?
हामी पेपैल, क्रेडिट कार्ड स्वीकार गर्दछौं।
म वेबसाइट मा आवश्यक उत्पादन पाउन सक्दिन। के यो अझै पनी Skayward दूरसंचार को माध्यम बाट किन्न सकिन्छ?
बिल्कुल। एक प्रसिद्ध निर्माता र फाइबर ओप्टिक उत्पादनहरु को आपूर्तिकर्ता को रूप मा, हाम्रा उत्पादनहरु को धेरै वेबसाइट मा सूचीबद्ध छैनन्। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस! उनीहरूले तपाइँलाई आवश्यक उत्पादन खोज्न मद्दत गर्न सक्छन्।
के मेरो अर्डर को लागी कुनै कर वा शुल्क लाग्ने छ?
तपाइँलाई सीमा शुल्क निकासी को कारणले सम्भावित शुल्क वा आयात शुल्क तिर्न आवश्यक छ।
ठेगाना: Changsha कार्यालय: 903, Guyuan रोड, Yuelu जिल्ला, Changsha, हुनान, चीन